SVILUPPARE PUNTI CHIAVE DI FORZAUna volta che hai - Page 96 of 174 - https://themummichogblog.com
Sary an-tsaina ianao miady hevitra olona iray izay mihevitra ianao eny faladiany, ka enim-polo segondra ianao mba hiaro ny zavatra inoanao. Tsoratra ny tenanao.
Atombohy na aiza na aiza. Tsy voatery hanomboka teo am-piandohan’ny ny famelabelaranao.
Atidoha ny mpahay siansa ankehitriny, aoka ho fantatrareo fa fahazavana vaovao avy amin’ny fotoana toy izany. Ny “Aha!” fotoana matetika isika no traikefa fa nanatsara ny fomba iray “Gamma lalamby” -a tampoka tselatra ny Gamma-ahevaheva asa manerana ny neocortex, ny famoronana ny atidoha foibe. Ireo Gamma spikes hitranga amin’ny kisendrasendra, matetika rehefa “nalefany ho” ny olana sy marina maimaim-poana-mpiara-miasa manodidina azy.  Izany no asa brainstorming haingana. Amin’ny rehetra ny fanangonana vaovao lehibe nataonao sahady, ny atidoha dia masaka ny synthesize ary hahazo ny tsara indrindra hevitra an-tsara izay tokony hanohana ny tanjonao.
Fa ny vaovao famelabelarana, Tad nifidy nanoratra hevitra haingana amin’ny Post-izy nanamarika. Ny tombony izany fomba izany fa afaka vondrona sy handamina ny naoty rehefa vita brainstorming. Jereo ny Tad ny an-tsoratra eo amin’ny pejy manaraka.
Ary Tad ny asa dia ny hanome ireo hevitra ireo rafitra sasany.
Voalohany, dia ataovy eo anaty vondrona lojika, ary nanao marika ny vondrona tsirairay.
Avy eo dia nandamina ny hevitra ao amin’ny vondrona tsirairay ao baiko izay toa lojika taminy: manomboka amin’ny angon-drakitra, hilaza ny fomba azony ny tahirin-kevitra, ary avy eo dia nanazava ny tahirin-kevitra (mba hahita ny farany eo amin’ny pejy manaraka).
Ela ny ela Tad nanana ny heviny voalamina, ka naka azy ihany no tokony ho antsasaky ny ora ny hanao io asa io. Na dia ny tsipiriany ara-teknika, ny famelabelarana ho tsotra: ny fifaninanana vaovao fitoriana dia haingana kokoa noho ny hafa palitao, dia afaka manaporofo fa
haingana kokoa, ary afaka milaza aminao ny antony izany haingana kokoa. Izany no ilaina ny mpihaino rehetra ny manilika ny modelim. Na inona na inona intsony no manangona fotsiny ny atidoha, fotaka ny fiantraikan’ny ny tahirin-kevitra, ary mangataka andro rehefa mandray fanapahan-kevitra.
Andramo izany ny tenanao. Medina ny heviny ary avy eo vondrona azy. Aiza no mahita ny fifandraisana eo amin’ny hevitra? Tsimoka satria tsy misy lehibe mihoatra ny telo ny vondrona, dia handamina ny hevitra mba ao anatin’ny vondrona tsirairay. Vondrona ireo dia ho tonga ny tena lohahevitra ny famelabelaranao.
Telo ny ny Fitaka
Nahoana i Tad tonga amin’ny vondrona telo ny hevitra? Nahoana no tsy efatra na dimy na enina?
Satria ny marani-tsaina. Fantany ny herin ‘ny “telo.” Psikology no mahita fa, raha ianao miezaka ny handresy lahatra olona, ​​telo fitarainana dia mandresy lahatra, ny roa dia matetika tsy ampy ny, fa ny efatra no be loatra. Mpampianatra Suzanne B. Shu sy Kurt A. Carlson hoe: “More filazana tsara kokoa mandra-pahatongan’ny filazana ny fahefatra amin’ny izay fotoana [mpihaino] jereo ny fitarainana amin’ny fisalasalana.” Ny mpikaroka izany hoe vokatry ny “hatsarany telo”, ary miahiahy fa misy zavatra atao amin’ny hoe hatraiza ny eo ho eo ny olona dia afaka hiatrehana in-teny fohy fitadidiana. 
Mazava ho azy fa lehibe mifampiresaka foana fantatra momba ny hatsarany telo; izany no mahatonga matetika izy ireo ankehitriny hevitra telo, telo hevi-dehibe, na telo hitany mba hanohanana ny fitarainana. Lincoln niresaka momba ny “fitondram-panjakana ny vahoaka, avy amin’ny vahoaka, ary ho an’ny olona.” Ny Frantsay miresaka momba ny “fahafahana, fitoviana, ary ny firahalahiana.” Kaisara nanao hoe: “Tonga aho dia nahita, ny nandreseko.” (Mariho anareo izahay, vao nanome ohatra telo.)
“Tsy misy afaka mahatsiaro mihoatra ny telo-dehibe.”
Tantara, hira, sy ny vazivazy dia feno threes ( “telo ry zalahy mandeha ho fisotroana …”). Naturalist Diane Ackerman maneho amin’ny fomba izao: “izahay toy-pitia amin’ny fomba fa obsessively hamorona antsika manokana, matetika ao amin’ny threesomes, toy ny maraina, antoandro, sy ny alina; Macbeth ny telo hafahafa rahavavy; ny telo olon-kendry; vonona, nametraka, mandehana; ny sonata ny ampahany telo-teny; ny fanomezana ny Génie telo tiany; kely, antonony, sady malalaka izy; amin’y; Goldilocks ary ny telo orsa; ny telo kisoa kely; sy ny sisa. Telo toa ny fomba ny safidy. “
Tadidio fa hoy izahay: ny famelabelaranao ao telo toko; ny fampidirana, ny vatana, ary ny famaranana. Koa ankehitriny, manana hevi-dehibe telo eo amin’ny tena mba hanohanana ny tanjonao. Ary inona no manapa-kevitra, mba hamonoana azy ireo.
Ahoana no tokony hatolotrareo ny hevitra?
Fantatsika fa ny olona mahatsiaro ny voalohany na ny farany mahare zavatra. Izy ireo ihany koa ny mahatsiaro vaovao miverimberina. Ny toro lalana dia tsotra: ho ny teboka voalohany na ny farany, ny famerimberenana dia hanampy ny olona hahatsiaro sy hahatakatra azy io.
Isika rehetra dia mahafantatra fa ny fahatsiarovana no mitete, dia ny mahatsiaro ihany no potika sy tapa-zavatra rentsika, ary be dia be ny zavatra ataontsika isika, hahatsiaro ny ratsy. Psikology hoe: “Avy amin’ny fomba fijery ny fahatsiarovana misy fahafahana maro ho diso vaovao voafango”  paminaniana teny hafa, ny mpanatrika fotsiny dia tsy hahazo izany tsara raha tsy nanapaka indray ny fahafahana diso fandray anao.
Izany dia midika hoe izay tianao aloha ny olona hahatsiaro-ary mamerina izany farany. Izany dia manome fanamafisana ny hevi-dehibe. Tokony koa dia miadana ary miteny mazava tsara ianao raha hanafaka ny hevi-dehibe. Araka ny CUNY mpampianatra sy ny manam-pahaizana ao amin’ny nomerika fifandraisana Cathy Davidson, “Rehefa hampiditra ny vokatra am-piandohana ny ara-barotra, na hanolotra ny totohondriny tsipika Any amin’ny farany, ny diction dia be miadana kokoa ny teninao no tsara e-masera-ci -a-Ted. “
Tokony milaza tsirairay teboka manan-danja, manohana izany, ary fintino azy. Miantso fa ny Triple S Formula.
Iza amin’izy roa lahy ireto ohatra moa no moramora kokoa ny mahatakatra?
“Ny hidin’akanjony sy ny seams dia apetraka mba hanangana ny permeability lafin-javatra amin’ny alalan’ny momba ny 2 litatra isaky ny metatra joro isan-tsegondra. Ankoatra izany, ny fitoriana dia kely hery undersized satria ny refiny dia mora mahatsapa ny ady sy teny hotsaraina habeny sy manova ny ny 7 isan-jato amin’ny aerodynamic tarihiny, toy ity tsary mampiseho. Amin’ny alalan’ny undersizing dia afaka manatsara permeability farafahakeliny 2 litatra sy mety kokoa. Fa ny tena fandrosoana dia textured, dimpled-raiki-pitia Hoditry ny Antsantsa rafitra. Teo ambanin’ny mikraoskaopy elektronika ao amin’ny rivotra tionelina rafitra ity toa mba hahafahan’ny momba ny 7 litatra fanampiny permeability nandritra ny 250-metatra hisosa Mazava ho azy. “
Ma se era tutto a posto ha lasciato lamaro in bocc
Moody Yachts Aft Cockpit 41 FATTO A MANOScopri in